အိမ်တွင်းပရိဘောဂများ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ as တစ်ခုအဖြစ်အိပ်ရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောအိပ်ယာသည်အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်သည်. အိပ်ရာအိပ်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေရန်ခက်ခဲသည်ဆိုပါက, ၎င်းသည်သင်နောက်တစ်နေ့ပင်ပန်းသည်ဟုခံစားရစေပြီး၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အလုပ်အခြေအနေကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်စေသည်. ပစ္စည်းအပေါ်အခြေခံပြီးအိပ်ရာကိုရွေးချယ်ဖို့အမျိုးအစားများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောထည်အဖြစ်, သတ္တု, နှင့် faux သားရေအိပ်ရာ. သားရေအဆင့်အတန်းရှိသောခေတ်မီဘက်စုံသုံးအိပ်ယာသည်လူတို့၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးအတွက်ပိုမိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောထွန်းသစ်စအိပ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံ, မြင့်မြတ်သောနှင့်ကြော့ရှင်းကနက်ရှိုင်းစွာလူရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါစေ.
ထို့ကြောင့်, ဒီဆောင်းပါးကသင့်ကိုခေတ်သစ်ဘက်စုံသုံးအိပ်ယာကမ္ဘာထဲရောက်စေပါလိမ့်မယ်. ဘာကြောင့်လူတွေဒီလိုအိပ်ရာမျိုးကိုရွေးချယ်ချင်ကြတာလဲ? အားသာချက်အမြောက်အများကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်.
သားရေကုတင်၏ခေါင်းစီးနှင့်ဘောင်ကိုလုံးဝ faux leather ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ဆိုလိုသည်မှာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်မအားထုတ်မှုကိုဆိုလိုသည်. ပြီးတာနဲ့သူကညစ်ပတ်တယ်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးပါဘူး, အစက်များကိုသန့်ရှင်းစေရန်ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာသုတ်ပဝါဖြင့်သုတ်လိမ်းပါ။ ဖုန်မှုန့်များကိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက်သင်သည်အခြားအရာများကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်များစွာသက်သာရုံသာမကမျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းကိုမစိုးရိမ်ပါ။.
corium နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အသားအရေကိုပိုမိုရွေးချယ်ရန် faux leather multifunctional bed သည်ပိုမိုရွေးချယ်စရာရှိသည်. သင်ရုံရိုးရှင်းသောဝယ်လျှင်, အောက်ပါအရောင်များကိုကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုတယ်, အဖြူ, အနီေရာင်, ခရမ်းရောင်, နှင့်အညိုရောင်. ဒါပေမယ့်ဂရုစိုက်ဖို့တစ်ခုအရာ, အရောင်များကိုသင်၏အခန်း၏ပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်သင့်သည်, အဖြူသည်ခေတ်သစ်ကိုဆိုလိုသည်; အနီရောင်စတိုင်; မောင်းသောအထည်; အညိုရောင်ပူနွေး, စသည်တို့. တစ် ဦး ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်အရောင်းလျှင်, အရောင်များကိုတောင်မှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ရန်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက် ဦး စားပေးမှုများမှအကြံဥာဏ်များကိုသင်အပြည့်အဝယူနိုင်သည်.
စတိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်, အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံအိပ်ရာကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးအကြင်သူသည်ရိုးရာစတုဂံအိပ်ရာဘောင်ကိုဖြိုဖျက်. ကျနော်တို့အချင်းနှစ်မီတာနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစားစတုဂံအိပ်ရာနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ပုတီးနှစ်ခုပေး.
ကုတင်ခေါင်းရင်းရှိခေါင်းအုံးကိုလည်း၎င်း၏အမြင့်အတိုင်းချိန်ညှိနိုင်သည်, ဤ Cervical spondylosis လူနာများအတွက်အမြင့်ကိုအသက်သာဆုံးထောင့်သို့ချိန်ညှိပေးရမည်. ထို့ပြင်, ၎င်းကိုဆေးရုံမှမငြင်းသောလူနာများအတွက်မိသားစုသူနာပြုအိပ်ရာတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်. နောက်ဆုံးတော့, တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အိပ်ရာမ ၀ င်မီမဂ္ဂဇင်းများ၊ စာအုပ်များကိုဖတ်ဖူးသည်, ခေါင်းအုံးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုရန်နူးညံ့သည်. ခေါင်းအုံးသည်နှစ်ခုလုံးလှပနိုင်သည်, ဖက်ရှင်ကျသည်, ပြေပြစ်သည်, ရက်ရောတယ်, ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံအတိုင်းနူးညံ့ချောမွေ့ faux သားရေနှင့်.
ဘက်စုံသုံးခုတင်တွင်စားပွဲအစုံပါ ၀ င်သည်, ဗီဒိုများ, အနားမှာထိုင်ခုံများတပ်ဆင်ထားသည်. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းညာဘက်, စာအုပ်ကဲ့သို့အရာများထည့်ရန်ခေါင်းတင်ဘေးမှသေးငယ်သောကက်ဘိနက်တစ်ခု, ခွက်များ, နှင့်သင်၏ဖုန်းအတွက်အားသွင်းပါ; ဧည့်သည်တွေတောင်သူတို့ကုတင်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့စနစ်တကျဖြစ်အောင်ထိုင်ခုံလေးတွေပေါ်မှာထိုင်နိုင်တယ်. ဤထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်အပိုဗီဒိုများနှင့်ထိုင်ခုံများကဲ့သို့ပရိဘောဂများထည့်သွင်းရန်မလိုသောကြောင့်နေရာအများကြီးသက်သာစေသည်. ၎င်းသည်ဤကုတင်ကဲ့သို့ကြီးမားသောပါဝါမရှိသောအခြားပရိဘောဂအပိုင်းများကိုနည်းလမ်းပေးသည်.
သင်၏အိပ်ခန်းသည်နွေးထွေးပြီးကြော့ရှင်းမှုကိုခံစားပါစေ, အချစ်ရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အတွက်အနှစ်သာရပြည့်ဝသည်. ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့်လူနေမှုဘဝကိုတိုးတက်စေပါ! ဒီဇိုင်းစုံဘက်စုံသုံးကုတင်တစ်လုံးရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ထည်ဆိုဖာ vs သားရေ
အမှတ်အသားများ (Tags): ဆိုဖာအစုကိုဝယ်ပါ, ဘက်စုံသုံးကုတင်